RASMI: FIFA oo ku dhawaaqday saddexda tababare ee ku tartami doona abaal-marinta macallinka sanadka ee The Best – Gool FM
RASMI: FIFA oo ku dhawaaqday saddexda tababare ee ku tartami doona abaal-marinta macallinka sanadka ee The Best
(Yurub) 02 Sebt 2019. Xiriirka kubadda cagta Adduunka ee FIFA ayaa ku dhawaaqay saddexda tababare ee isagu soo haray abaal-marinta macallinka sanadka ee The Best, waxaana dhammaantood ay yihiin tababarayaal ka xamaasha horyaalka Premier League.
Macalinka Liverpool ee Jurgen Klopp, tababaraha Manchester City ee Pep Guardiola iyo hoggaamiyaha kooxda Tottenham ee Maurico Pochettino ayaa isagu soo haray abaal-marinta tababarka sannadka ee FIFA.
Ku guuleysiga abaal-marintan waxaa ugu cad-cadmacallinka kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp, kaasoo Reds ku hoggaamiyey hanashada Champions League xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
Macallinka kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa isaguna kooxdiisa Sky Blue ka caawiyey inay markeedii labaad oo xiriir ah ay ku guuleystaan horyaalka Premier League.
Tababaraha kooxda Tottenham ee Mauricio Pochettino ayaa isaguna ka soo muuqday saddexda tababare ee isugu soo haray tartanka abaal-marintan kaddib markii uu si lama filaan ah Spurs ugu soo saaray final-ka Champions League.
Tababaraha ku guuleysta abaal-marintan ayaa lagu shaacin doonaa xafladda abaal-marinta FIFA lagu bixin doono oo lagu qabanayo magaalada Milano 23-ka bishan September.
Daa’uud Tubaal oo ka soo muuqan doona tartanka Degmooyinka Gobolka Banaadir